सपनामा मृत्यु देख्नुको मतलव के ? पैसा देख्नुको मतलब पनि बुझ्नुहोस् - Gandak News
सपनामा मृत्यु देख्नुको मतलव के ? पैसा देख्नुको मतलब पनि बुझ्नुहोस्
गण्डक न्यूज द्वारा २४ चैत्र २०७७, मंगलवार १४:४२ मा प्रकाशित 0
सपना मनको एक विशेष अवस्था हो जसमा वास्तविकताको आभार हुन्छ । सपना न त जागृत अवस्थामा देखिन्छ न नै निद्रामा । यो दुईको बीचको अवस्था हो । सपना देख्नुको पछाडि खानपिन र रोगको पनि ठूलो भूमिका पनि हुन्छ । यसको पछाडि ग्रह र राशि पनि जिम्मेवार हुन्छन् । वायु र जल तत्वका राशि भएकाहरुले बढी सपना देख्छन् । तर हरेक सपनाका कुनै अर्थ हुँदैन । धेरैजसो सपना निरर्थक हुन्छन् ।
यदि सपनमा आफूले र अरु कसैले पूजा पाठ गरेको देख्नुभयो भने तपाईंले कुनै ठूलै लाभ पाउने संकेत हो । विशषेगरी जागिरसँग सम्बन्धित लाभ हुनसक्छ ।
यदि सपनामा पैसा, गर–गहना देख्नुभयो भने यो बिरामीको संकेत हो । तपाईं बिरामी पर्न सक्नुहुन्छ वा तपाईंको जागिर जान सक्छ । यदि मन्दिर वा देवी देवताको सपना देख्नुहुन्छ भने यो तपाईंको संस्कार कस्तो छ भनेर सूचना दिन्छ । यदि खानपिनका चिज सपनामा देख्नुहुन्छ भने यसले स्थान परिवर्तनको संकेत दिन्छ ।
सपनामा सेतो खानेकुरा देख्नु तपाईंको जीवनमा कुनै ठूलो परिवर्तको संकेत हुनसक्छ । साधारणतया यस्तो सपनाले कुनै ठूलो समस्याबाट मुक्ति दिलाउने गर्छ ।